ဘယျလောကျပဲကကျြကကျြ ခဏနရေငျ ပွနျမသှေ့ားတာပါပဲ။
သခြောလလေ့ာပမေယျ့ ပွနျတှေးကွညျ့ရငျ နားလညျပမေယျ့ သသေခြောခြာနားမလညျသလို ဆိုတာမြိုးကို လူငယျတှေ တျောတျောမြားမြားမှာ ဖွဈတတျ၊ တှရေ့တတျပါတယျ။
သငျယူလလေ့ာထားတဲ့ ပညာရပျတှကေို တဈသကျတာ မှတျမိလိုပါသလား??? ဒါဆိုရငျတော့ Feynman နညျးအတိုငျး လလေ့ာသငျယူလိုကျကွရအောငျ။
Feynman နညျးပညာဆိုတာဘာလဲ? Feynman ဆိုတာဘယျသူလဲ? ဘာလို့သူ့နညျးစနဈတှအေတိုငျး လလေ့ာသငျ့တာလဲ . . . .
Feynman ဆိုတာ အသဈဆနျးတဈခုခုကို လလေ့ာတဲ့အခါ၊
သိပွီးသားအရာတဈခုခုကို တဈဖနျပိုပွီးနားလညျသဘောပေါကျအောငျ လလေ့ာတဲ့အခါ
စာမေးပှဲအတှကျ လလေ့ာတဲ့အခါ စသဖွငျ့ လလေ့ာမှုမှနျသမြှကို ပိုမိုအကြိုးရှိရှိနဲ့ နားလညျလှယျကူစရေနျ ကူညီပေးတဲ့ နညျးစနဈတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။
Richard Feynman (1918–1988) ကတော့ စာရေးဆရာ၊ ရူပဗဒေပညာရှငျ၊ အတှေးအချေါပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူ့ခတျေသူ့အခါမှာ အရေးအပါဆုံး ရူပဗဒေပညာရှငျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
-သူသညျကှမျတနျ electrodynamics (QED) တဈခုလုံးကိုရှဆေ့ောငျအဖွဈစတငျခဲ့သညျ။
-၁၉၄၀ ပွညျ့လှနျနှဈမြားတှငျသူ၏ Feynman ပုံကွမျးအားတီထှငျမှုသညျလိုအပျသောအမွငျအာရုံဆိုငျရာရှငျးလငျးခကျြကို subatomic အမှုနျမြား၏အပွုအမူအားသိရှိစရေနျကူညီပေးခဲ့သညျ။
-သိပ်ပံပညာရှငျမြားအားအလငျးနှငျ့ အရာဝတ်ထုမြားအပွနျအလှနျဆကျသှယျမှုကိုနားလညျစရေနျကူညီပေးသောကွောငျ့သူသညျ ၁၉၆၅ ခုနှဈတှငျနိုဘယျဆုရရှိခဲ့သညျ။
-1986 ခုနှဈတှငျသူ၏သုတသေနနှငျ့ရှငျးလငျးခကျြအာကာသလှနျးပြံယာဉျ Challenger ဘေးအန်တရာယျ၏အကွောငျးရငျးကိုနားလညျသဘောပေါကျရနျကူညီရာတှငျအရေးပါခဲ့သညျ။
Feynman နညျးစနဈတှနေဲ့ ဘယျလိုတှေ လလေ့ာကွမလဲ။
Feynman နညျးပညာနှငျ့လလေ့ာရနျအပိုငျး (၄) ပိုငျးရှိပါသညျ။
(၁) စတငျလလေ့ာခွငျး၊ စာဖတျခွငျး
(၂) ရေးမှတျခွငျး၊ ပွနျလညျရှငျးပွချငး
(၃) ကှာဟခကျြမြားနှငျ့ ရှငျးလငျးခကျြမြားအား ပွနျလညျသုံးသပျခွငျး
(၄) အစအဆုံး ပွနျလညျသုံးသပျခွငျး
- ပထမဆုံးအနနေဲ့ ကိုယျဘာကိုလလေ့ာမလဲဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျကိုရှေးခယျြပါ။
- လလေ့ာရငျးနဲ့လုပျရမှာကတော့ ကိုယျနားလညျသမြှကို ခရြေးရမှာပါ။ တဈယောကျယောကျကိုရှငျးပွနသေလိုမြိုး မှတျစုတိုလေးတှနေဲ့ လလေ့ာတာက ပိုမိုမှတျမိလှယျစပေါတယျ။
- အကုနျလုံးသခြောနားလညျသှားပွီဆိုမှ အကွောငျးအရာတဈခုလုံးကို ပွနျပွီး ရှငျးပွပါ။
အခွားသူတဈယောကျကိုရှငျးပွနသေလိုမြိုး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျပွီး ရှငျးပွပါ။ ကိုယျ ရှငျးပွနတောကို နားထောငျမယျ့သူမရှိဘူးဆိုရငျတောငျ ဗီဒီယိုလေးရိုကျထားပါ။ ပွီးရငျ ကိုယျရိုကျထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပွနျကွညျ့ပွီး ကိုယျရှငျးပွတာတှမှော နားမလညျတာ၊ ကမောကျကမဖွဈနတောတှကေို ပွနျလညျသုံးသပျပါ။
- သသေခြောခြာ မရှငျးပွနိုငျသေးဘူးဆိုရငျ ထပျခါထပျခါ ပွနျပွီးလလေ့ာပါ။
ဒီနညျးလမျးတှကေ အရမျးအကြိုးရှိပွီး စှဲမွဲပွီး မှတျမိေုစမယျ့ နညျးလမျးလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ မောငျငယျ/ညီမငယျတို့အနနေဲ့ ပညာရပျအသီးသီးကို လလေ့ာတဲ့နရောမှာ မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးလေးတှနေဲ့ လလေ့ာနိုငျစရေနျ မြှပေးဝေးလိုကျပါတယျ။
ဘယ်လောက်ပဲကျက်ကျက် ခဏနေရင် ပြန်မေ့သွားတာပါပဲ။
သေချာလေ့လာပေမယ့် ပြန်တွေးကြည့်ရင် နားလည်ပေမယ့် သေသေချာချာနားမလည်သလို ဆိုတာမျိုးကို လူငယ်တွေ တော်တော်များများမှာ ဖြစ်တတ်၊ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
သင်ယူလေ့လာထားတဲ့ ပညာရပ်တွေကို တစ်သက်တာ မှတ်မိလိုပါသလား??? ဒါဆိုရင်တော့ Feynman နည်းအတိုင်း လေ့လာသင်ယူလိုက်ကြရအောင်။
Feynman နည်းပညာဆိုတာဘာလဲ? Feynman ဆိုတာဘယ်သူလဲ? ဘာလို့သူ့နည်းစနစ်တွေအတိုင်း လေ့လာသင့်တာလဲ . . . .
Feynman ဆိုတာ အသစ်ဆန်းတစ်ခုခုကို လေ့လာတဲ့အခါ၊
သိပြီးသားအရာတစ်ခုခုကို တစ်ဖန်ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်အောင် လေ့လာတဲ့အခါ
စာမေးပွဲအတွက် လေ့လာတဲ့အခါ စသဖြင့် လေ့လာမှုမှန်သမျှကို ပိုမိုအကျိုးရှိရှိနဲ့ နားလည်လွယ်ကူစေရန် ကူညီပေးတဲ့ နည်းစနစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Richard Feynman (1918–1988) ကတော့ စာရေးဆရာ၊ ရူပဗေဒပညာရှင်၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ အရေးအပါဆုံး ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
-သူသည်ကွမ်တန် electrodynamics (QED) တစ်ခုလုံးကိုရှေ့ဆောင်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။
-၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်သူ၏ Feynman ပုံကြမ်းအားတီထွင်မှုသည်လိုအပ်သောအမြင်အာရုံဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ကို subatomic အမှုန်များ၏အပြုအမူအားသိရှိစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
-သိပ္ပံပညာရှင်များအားအလင်းနှင့် အရာဝတ္ထုများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုနားလည်စေရန်ကူညီပေးသောကြောင့်သူသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်နိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့သည်။
-1986 ခုနှစ်တွင်သူ၏သုတေသနနှင့်ရှင်းလင်းချက်အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Challenger ဘေးအန္တရာယ်၏အကြောင်းရင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီရာတွင်အရေးပါခဲ့သည်။
Feynman နည်းစနစ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုတွေ လေ့လာကြမလဲ။
Feynman နည်းပညာနှင့်လေ့လာရန်အပိုင်း (၄) ပိုင်းရှိပါသည်။
(၁) စတင်လေ့လာခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း
(၂) ရေးမှတ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရှင်းပြခ်ြငး
(၃) ကွာဟချက်များနှင့် ရှင်းလင်းချက်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
(၄) အစအဆုံး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
- ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
- လေ့လာရင်းနဲ့လုပ်ရမှာကတော့ ကိုယ်နားလည်သမျှကို ချရေးရမှာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှင်းပြနေသလိုမျိုး မှတ်စုတိုလေးတွေနဲ့ လေ့လာတာက ပိုမိုမှတ်မိလွယ်စေပါတယ်။
- အကုန်လုံးသေချာနားလည်သွားပြီဆိုမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကို ပြန်ပြီး ရှင်းပြပါ။
အခြားသူတစ်ယောက်ကိုရှင်းပြနေသလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီး ရှင်းပြပါ။ ကိုယ် ရှင်းပြနေတာကို နားထောင်မယ့်သူမရှိဘူးဆိုရင်တောင် ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ရှင်းပြတာတွေမှာ နားမလည်တာ၊ ကမောက်ကမဖြစ်နေတာတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
- သေသေချာချာ မရှင်းပြနိုင်သေးဘူးဆိုရင် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ပြီးလေ့လာပါ။
ဒီနည်းလမ်းတွေက အရမ်းအကျိုးရှိပြီး စွဲမြဲပြီး မှတ်မိေုစမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ငယ်/ညီမငယ်တို့အနေနဲ့ ပညာရပ်အသီးသီးကို လေ့လာတဲ့နေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ လေ့လာနိုင်စေရန် မျှပေးဝေးလိုက်ပါတယ်။